Madaxweynaha Filibiin oo u heesay Donald Trump – VIDEO • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Madaxweynaha Filibiin oo u heesay Donald Trump – VIDEO
Madaxweynaha Filibiin oo u heesay Donald Trump – VIDEO
November 13, 2017 - By: Khalid Yusuf
Madaxweynaha Filibiin Rodrigo Duterte oo xalay casho soo dhaweyn ah u sameeyey hogaamiyayaasha dalalka Aasiya ayaa si kadis ah hees ugu qaaday Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ka qeyb galaya shirka urur gobaleedka Asean ee wadamada Koonfur-Bari Aasiya.
Madaxweynaha Filibiin ayaa hees caan ka ah dalkiisa oo loo yaqaan “Ikaw” (ADIGA), si wadajir ah ulla qaaday fanaanad dalkaasi caan ka ah oo lagu magacaabo Pilita Corrales, iyagoo u heesaya Madaxweynaha Maraykanka oo goobtaasi fadhiyey. Ereyada heestaasi ayaa waxaa kamid ahaa “…Waxaad tahay Qalbigeyga, Waxaa tahay Iftiinka Adduunkeyga…”
Mr. Duterte ayaa markuu heesta dhameeyey si kaftan ah u yiri heestan waxaa amar igu siiyey inaan u qaado Madaxweyne Trump.
Hogaamiyaha Filibiin oo marti gelinaya 19 Madaxweyne iyo Raysalwasaare ee dalalka Aasiya ayaa soodhaweyn diiran u sameeyey Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo dhankiisana amaan weyn usoo jeediyey dowlada Filibiin ee marti gelisay.
Labada nin ayaa xiriir wanaagsan leh, maadaama Madaxweynaha Maraykanka Trump uu ka gaabsaday inuu cambaareeyo falalka ka dhanka ah xaquuqul insaanka ee lagu eedeeyo Madaxweynaha Filibiin, waxaana horey loo xasuustaa xiriirkii xumaa ee Duterte iyo Madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama.
Trump ayaa intuu ku sugnaa Filibiin soo hadal qaadin arrimaha Xaquuqul Insaanka balse si weyn diirada u saaray amaanta iyo mahadnaqa soodhaweynta weyn ee loo sameeyey.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isagu ah shaqsi jecel in si weyn loo amaano mar walba taasi oo noqotay farsamo fudud oo ay hogaamiyayaasha taageeradiisa doonaya ay kusoo jiitaan.